Madaxweynaha dalka oo saxiixay xeerar dhowr ah | Star FM
Home Wararka Kenya Madaxweynaha dalka oo saxiixay xeerar dhowr ah
Madaxweynaha dalka oo saxiixay xeerar dhowr ah
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa maanta si rasmi ah qalinka ugu duugay xeerka qoondeynta miisaaniyadda ee sanadka 2021-ka.
Waxaa uu nidaamkan dardargelinayaa in golaha fulinta , baarlamaanka iyo waaxda garsoorka ay adeegsan karaan 1.9 tiriliyoon oo shilin oo loo qoondeeyay.
1.2 tiriliyoon oo lacagtan ka mid ah waxaa loo isticmaali doonaa howlaha maalinlaha ee waaxyahan halka 668.37 bilyan lagu qarash gelinaya barnaamijyada horumarineed.
Hoggaamiyaha dalka ayaa sidoo kale saxiixay sharciga maaliyadda ee 2021-ka oo qeexaya isbeddelo la xiriira canshuurta, maareynta kheyraadka dadweynaha , caymiska , howlgabka , ganacsiga suuqyada, dhigaalka ama keydka iyo waxyaabaha la midka ah.
Hoggaamiyaha dalka oo ku sugan wadanka Faransiiska ayaa sidoo kale saxiixay xeerka qoondeynta miisaaniyadda dheeraadka ah iyo qaybsashada dakhliga.
Afhayeenka madaxtooyada dalka ee State House Kanze Dena ayaa warbaahinta u sheegtay in xeerarka uu saxiixay madaxweynaha ay sare u qaadayaan ganacsiga gudaha wadanka.
Waxaa sidoo kale fududaan doonto uruurinta dakhliga ka soo xaroodo canshuuraha iyo taageeridda barnaamijyada loogu adeego shacabka ee lagu wanaajinaya noloshooda.
Previous articleDHAGEYSO:Xaalad Binu aadam oo ka Jirta Magaalada Xudur
Next articleDhinacyada ka soo horjeeda BBI oo maanta maxkamadda u warramaya